२०६८ असोज २६ गते विहीवार October 13, 2011
चायाँ (Dandruff) दुई किसिमको हुन्छ ।
१. चिल्लो चायाँ (Oily Dandruff)
२. सुख्खा चायाँ (Dry Dandruff)
यस्तो चायाँ यदि चिल्लो किसिमको छ भने यो एउटा रोग हो । र यदि टाउकोमा कत्ला – कत्ला जस्तो छ भने सुख्खा चायाँ हो । यो शरीरमा रक्त सञ्चारको अनियमितता, अस्वस्थ खानपिन बानी, सफाई नहुनु बि कम्प्लेक्सको कमी, चिन्ता, मौसमको बदलिनु र पानी फेरिनु आदिले डेन्ड्रफ हुन्छ । डेन्ड्रफको लागि सबैभन्दा वेश शिकाकाई र त्रिफला (अमला, बर्रा र हर्रा) को मिश्रण लगाएरमा अति नै लाभदायक हुन्छ ।
चिल्लो डेन्ड्रफ (Oily Dandruff) मा त्रिफला लोशन र केही थोपा ग्लिसरिन र रोज वाटरसंग बराबर मिलाएर लगाइन्छ । यसको उपचारको लागि पहिला टाउकोमा लोशन लगाइन्छ र Red Lamp दिइन्छ । त्यसपछि हल्का मसाज दिएर शेम्पू गर्ने । त्यसपछि High Frequency दिइन्छ । ३ देखि ५ मिनटसम्म दिइन्छ । यसरी २४ पटकसम्म उपचार गरिन्छ ।
हरेक दिन अथवा एक दिन छोडेर अर्काे दिन Mild शेम्पू गर्ने । शेम्पू गर्दा केवल एकपल्ट गरेर राम्रोसंग मनतातो पानीले धुनु पर्छ । शेम्पू पनि बदल्नु पर्छ । कपालमा धेरै कत्ला जस्तो हुनु पनि एउटा एलर्जी प्रतिक्रिया हो । अर्को छिटो डेन्ड्रफ हटाउने माध्यम Cider Vinegar
(साइडर भिनेगर) हो । यसलाई पानीसंग मिसाएर ल्याउन सक्छ र धेरैजसो Lavender को पानीमा मिलाएर लगाउनु पर्छ । यो राती लगाएर सुत्नु पर्छ ।
अर्का घरेलु उपाय तातो क्यास्टर (Castor) तेल (जसले केशलाई बलियो पार्छ) ले हप्तामा दुई पटक टाउकोमा मसाज गर्ने । तबसम्म जबसम्म डेन्ड्रफ हट्दैन । यो सुख्खा केशको लागि पनि अति उत्तम उपचार हो । टाउकोमा यस तेलले मसाज गरेपछि टाउकोमा प्लास्टिक तातो (Heat Cap)(टोपी जस्तो) अथवा Shawer Cap टावेलले ढाकेर १÷२ घण्टाको लागि राख्नु पर्छ ।
यसमा शेम्पू गर्दा डिटरजेन्ट नभएको शेम्पू जस्तो कि ओलिय (Olive Oil)तेल अथवा नरिवलको तेल मात्रा भएको शेम्पूले नुहाउनु पर्छ । यसमा मुख्य यो कुराको ध्यान दिनु पर्छ कि कपालमा प्रयोगमा ल्याइने बस्तुहरु– जस्तो कि ब्रुस, काइ“यो, सुत्दा लगाउने क्याप आदि सफा हुनुपर्छ ।
केही मानिसहरुलाई शेम्पू र कण्डिशनरले पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ । यसको साथै केशमा ब्लीच, रंग गर्नाले र Petmues र टाउकोमा रातो—रातो दाना (Roshes) पनि हुन सक्छ । यी चीजहरुले यदि तपाईको त्वचालाई सहन सक्दैन भने यी चीजहरुको पहिला अलिकति त्वचामा लगाएर (Patch test) हेर्नु पर्छ । शेम्पू गर्दा पनि एक दिन छोडेर अर्काे दिन खास फर्मुला भएको Cleanser (क्लीजर)को प्रयोग गर्नु पर्छ ।
जुम्राको उपचार (Lice's Treatment):
साधारणतयाः मान्छेको कपालमा जुम्रा हुन्छ । यसरी जुम्रा हुनु कुनै रोग होइन । यदि कपाल स्वस्थ्य रहेमा जुम्रा हुने सम्भावना हु“दैन । प्रायः स्कूलमा पढ्ने बच्चाहरुमा जुम्रा हुन सक्छन् । किनभने जुम्रा प्रायः एकबाट अर्का ठाउँमा सजिलैसित सर्न सक्छ ।
आजकलको युगमा यसको उपचारको लागि मेडिकेयर शेम्पू प्रयोग गर्नु सबभन्दा सजिलो उपाय हो । यसलाई शेम्पूको रुपमा प्रयोग गरेर ५–१० मिनेटको लागि त्यसै छोडिदिने र त्यसपछि राम्रोसंग पानीले पखाल्नु पर्छ ।
मेडिकेयर शेम्पूलाई एक दिन छोडेर अर्का दिन लगातार एक हप्तासम्म प्रयोग गरेमा केशबाट लिखा झरेर अथवा मरेर जान्छ । जसले जुम्रा बढ्न दिंदैन । त्यस्तै गरेर जुम्रा पनि मर्दै जान्छ । यसैले जुम्रा केशमा नपार्नको लागि केश सफा हुनु जरुरी छ । ०००